युगान्तकारी पार्टी एकता,अब सफल हुन्छ समृद्धिको यात्रा -::DainikPatra
युगान्तकारी पार्टी एकता,अब सफल हुन्छ समृद्धिको यात्रा
अन्ततः लामो समय देखिको सोच, अभ्यास र प्रयत्नका कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको छ । जननेता मदन भण्डारी र पार्टीभित्र कुशल संगठकको रुपमा सुपरिचित जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार पार्टी एकता भएको छ । यो एकता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अत्यन्तै ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो एकता हुनुमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा निर्माण भएको जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक अवधारणा र त्यसको कार्यनीतिले प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।
२००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा जगजाहेर छ । ६९ वर्षसम्मको लामो यात्राका क्रममा अनेकौँ प्रकारका चुनौतीको सामना गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले यो उचाई प्राप्त गर्नुलाई उल्लेख्य सफलता मान्नुपर्दछ । अहिलेको एकताका लागि जो जसबाट, जहाँबाट प्रयत्न भयो र सफलतामा पु¥याइयो । यसमा सबै बधाईका पात्र भएका छन् । यो एकता नेपाली जनताको सफलता हो । नेपाल राष्ट्रको सुदूर भविष्यका लागि पनि ऐतिहासिक क्षण हो ।
यो एकताका लागि विशेषतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विशेष बधाई दिनुपर्दछ । साथै यो एकतालाई सहजीकरण गर्नेतथा नेताहरुलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने नेता,कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु पनि यसमा बधाईका पात्र छन् । यस कार्यका लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन कहिले सुधारवादी, कहिले उग्रवादी त कहिले दक्षिणपन्थी धारबाट उतारचढावका बीच विकसित हुँदै आएको हो । कहिले शान्तिपूर्ण संघर्ष, कहिले सशस्त्र, कहिले शासन सत्तामाथि हस्तक्षेपको नीति लिँदै आएको हो । यसक्रममा २००७ सालमा भएको जनक्रान्ति, २०१७ सालमा भएको शाही षडयन्त्र अनुरुप निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना र प्रजातन्त्रको अपहरण, २०३६ सालको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, २०५२ देखि सुरु भएको राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको माओवादी सशस्त्र युद्ध अनि २०६२÷०६३ को एमाले र कांग्रेससहितका लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दल र माओवादीसहितको संयुक्त जनक्रान्ति नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक मोडहरु हुन् । त्यसैको जगमा संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान बनेको छ । मुलुकमा संघीय संरचनाका आधारमा स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका चुनावहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । सबै तहका सरकार पनि बनिसकेका छन् ।
मुलुकको नक्सा विश्वमा विगतकै जस्तो भएपनि आन्तरिक रुपमा नयाँ नक्सा कोरिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा तयार भएको नयाँ नक्सा कुन रुपमा विकसित हुने हो आम नेपालीको जिज्ञासाको विषय बनिरहेको छ । संघीयताको सफलता र असफलताको विषयमा बहस र चर्चा पनि हुने गरेकोछ । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेको हुनाले अब संघीयताको असफलताको सपना देख्नुभन्दा के कसरी सफल बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ नै हामी सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । इतिहासको गति कहिल्यै पनि पछाडि फर्किदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । यो समग्र आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा नयाँ संविधानमा संस्थागत भएकोले यसको विकल्प खोज्नु अब बुद्धिमता ठहर्दैन । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएका जनअधिकारहरुको प्रयोग, उपयोग र सफल कार्यान्वयन गर्नु सबै नेपालीको यतिबेलाको प्रमुख दायित्व हो । कन्फ्युजनमा हामी कोही पनि रहनु हुँदैन । संविधानतः मुलुकले बाटो लिएको छ । यसलाई जनस्तरमा पु¥याउँदै उत्साहजनक ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । कोही कहीँ कतै पनि अल्मलिनु हुँदैन ।
बिहीबार भएको दुई कम्युनिष्ट पार्टी बीचको ऐतिहासिक एकताले नेपाल र नेपालीका बीच मात्र होइन विश्वलाई नै तरङगित गरेकोछ । यसको प्रभाव नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै क्रमशः देखा पर्नेछ । जसरी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादले नेपालको राजनीतिलाई मात्र तरङ्गित गरेको होइन विश्वलाईनै तरङ्गित गरेको हो र गरिरहेको छ । अहिलेको पार्टी एकतासँगै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका दुई किसिमका धारहरु जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादबीचको एकता पनि हो । यी दुई धार र दृष्टिकोणको संमिश्रण हुँदा नेपाली भूमिमा विकसित भएका विचारले विश्वलाई झनै तरङ्गित गर्नेछ । साँच्चिकै यो ऐतिहासिक एवं युगान्तकारी एकतालाई बलियो बनाउँदै लैजाँदा देशको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । देशले छोटै समयमा फड्को मार्ने छ । विश्व समुदायले अहिलेसम्म नेपालको विकासमा योगदान दिन चाहेर पनि नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक खिचातानी, द्वन्द्व, अशान्ति र अविश्वासका कारण पछि हटेको अवस्था थियो । त्यो अवस्था अब मुलुकमा रहँदैन । अब मुलुकले दु्रत गतिमा विकास गर्छ । आगामी १० वर्षमा विश्वकै नमुना मुलुक नेपाल बन्न सक्छ । पूर्ण आशावादी बनौँ, शान्ति, विकास र समृद्धिको महान अभियानमा सहभागी बनौँ । सुखि नेपाल र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पारौँ । फेरि पनि धेरै धेरै बधाई ! के.पी. ओली र प्रचण्ड अनि पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरु सबैलाई ।